Tokony hampatahotra antsika ve ny variant COVID any India?
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » India Travel News » Tokony hampatahotra antsika ve ny variant COVID any India?
India COVID hafa
Any India, ny fiovaovan'ny COVID-19 dia manana fatra latsaky ny 10 isan-jato raha any Eropa kosa dia tranga an-jatony vitsivitsy. Ny variant dia manana mutation roa fantatra, fa sambany izy ireo dia miara-miaina toy ny aretina tokana.
Mandrara ny fitsangatsanganana avy any India mankany amin'ny fireneny ireo firenena satria mihombo ny varotra COVID "India" any.
Any India, 17 tapitrisa ny totalin'ny aretina ary 192,000 no maty, ary amin'izao fotoana izao dia misy tranga 300,000 2,000 mahery sy maty mihoatra ny XNUMX.
Ity no fotoana voalohany nahitana ny proteinina spike 2 an'ny "India" B.1.617 variant ho toy ny fantsona iray.
Ny variana COVID "India", B.1.617, dia hita tamin'ny 5 Oktobra tao Maharashtra, fanjakana misy an'i Mumbai. Izy io dia misy mutation roa (efa fantatra) ao amin'ny proteinina Spike: E484Q sy L452R. Ity no fotoana voalohany nisehoan'ny roa tamin'ny karazana iray. Ahiana ny fisehoan-javatra mety haneho loza eo amin'ny firenena hafa koa. Hany ka ny minisitry ny fahasalamana tany Italia, Roberto Speranza, dia nanao sonia ny didim-pitondrana iray tamin'ny 21 aprily 2021, mandrara ny fidirana any Italia ho an'ireo izay tao India nandritra ny 14 andro talohan'ny niaingany, afa-tsy ireo mpiasa karana izay monina any Italia amin'ny fomba ofisialy. . Ny mpandeha rehetra dia tsy maintsy manao fitsapana swab amin'ny fiaingany ary amin'ny fahatongavany ao anatin'ny 48 ora ao amin'ny tanàna onenan'i Italia.
Taorian'ny famotopotorana nataon'ny mpanoratra ity lahatsoratra ity tao amin'ny seranam-piaramanidina Rome Fiumicino herinandro talohan'ny didim-pitsarana 21 aprily dia voafehy ihany ny mpandeha tonga avy any India. Afaka izy ireo tamin'izay. Tao amin'ny gara Roma Termini dia nangatahana izy ireo hameno taratasy alohan'ny hiakarany amin'ilay lamasinina. Tsy fantatra raha ho fitaovana i Fiumicino hanatanteraka ny fitsapana swab rehefa tonga.